Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in mkv?
Qeybta 2: Sida loo badalo M2TS in MKV la gacan-jabis
Qeybta 3: Sida loo badalo M2TS in MKV la makemkv
Qeybta 4: Sida loo badalo M2TS in MKV la Wondershare
Labada m2ts iyo mkv waxay leedahay faa'iidooyin aan la iskama indho tiri karo iyo labada qaabab taageerayaasha waa ay jiraan in la hubiyo in taageero sii socoto oo sabab la mid ah loo eegin tayada labada qaabab ay tahay mid aad u muhiim ah in la ogaado in size sawirka iyo tayada ka duwan badan oo sabab la mid ah waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan sababo dhowr ah iyo faa'iidooyinka diinta m2ts in mkv marka ay timaado size iyo guud ahaan tayada.
Habka in uu leeyahay in la raaco ayaa hoos lagu sharaxay si faahfaahsan weyn oo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in nidaamka la raaco sida ay tahay si dhalna ma lahayn food saaray user ee arrintan la xiriira. The Screenshot la xiriira sidoo kale hubin doona in user helo natiijada sidii loo soo sheegnay. By qaadashada eegno Screenshot ka user ayaa sidoo kale awood u yeelan doonaan in ay helaan shaqo lagu sameeyey si fudud oo ku qanacsan. Tallaabooyinka ayaa hadda loo Caddaynay weyn:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in ay gacan-jabis waxaa soo bixi https://handbrake.fr/ oo mar rakibo waxaa markaas la buuxiyo waa in la bilaabay in ay helaan suuqa kala muhiimsan ee
2. dejinta ee faylka m2ts yahay markaas in la sameeyo uu furmo suuqa ku habboon iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in mid ka mid file oo kaliya in la keeno karo waqti:
3. qaab saarka ayaa markaa waa in la dhigay sida rabitaan. Software ayaa sidoo kale hubin doona in demo saarka ayaa lagu muujiyay:
4. button bilowga ayaa markaa waa in la sii adkeeyey si bilowday qaab beddelidda iyo habka uu dhamaado,
5. Dhammaan OS oo ay ku jiraan Mac, daaqadaha iyo Linux taageeraan gacan-jabis ah sidii loo horumariyo Waayo, kuwaas oo dhan OS fududaato ee user ee arrintan la xiriira si ay diinta ka marnaba weli arin kasta.
Gacan-jabis waa caan ah khasaaraha tayada video sida file ah waxaa loo baddalaa ka m2ts in mkv oo ma jiraan wax dibadda ugu soo arrintan la xiriira. Si aad u dhigay abbaaro user leeyahay inuu qaado tayada iyo waxba la samayn karaa in arrintan la xiriira.
Waxyaabaha soo socda ayaa waa hab in arrintan la xiriira in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican khibrad arrintan la xiriira. waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka waa mid aad u fudud oo sahlan in la raaco:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in website-ka rasmiga ah ee makemkv waxaa loo isticmaalaa sida http://www.makemkv.com/ si loo hubiyo in nidaamka kiciya iyo barnaamij la soo bixi:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylka la doorto:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in folder wax soo saarka la doorto:
4. button MKV Samee waa in la sii adkeeyey dhammayn nidaamka iyo badalo faylka si guul leh:
Sidoo kale waa in la ogaadaa in daaqadaha iyo OS Mac yihiin labada kuwa taageeraya barnaamijka xoog buuxa. Linux iyo Sun OS sidoo kale waa kuwa kaas oo barnaamijkan la soo saaro.
Ma jiro hab inuu ka baxo arrinta soo gaartay in tayada faylka la gediyay iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ay u baahan tahay in la hubiyo in goobaha wax soo saarka ayaa lagu wadaa aad si taxadar leh laakiin weli haddii ay dhibaatadu tahay wajahay ka dibna waxaa jira wax la qaban karo arrintan la xiriira.
User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in hab-socodka hoos ku xusan waxaa la socda in arrintan la xiriira:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html si loo hubiyo in talaabooyinka horukaca ee habka iyo software la soo bixi oo ku rakiban. Marka la sameeyo barnaamij waa in la bilaabay: a
2. button load waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in CD ah, DVD ama barnaamijka meel kasta oo kale waxaa ku raran yihiin:
3. saarka ayaa markaas waa in la soo xulay guddi saxda ah ee barnaamijka si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button diinta la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka la soo gabagabeeyey in danta ugu fiican ee user:
User isticmaali karaan barnaamijkan on labada Mac iyo daaqadaha u natiijada ugu wanaagsan.
Si ka duwan oo kale laba barnaamij oo lagu soo sheegnay waa in la ogaadaa in Wondershare video convertor kama dambaysta ah inuu xaqiijiyo in uu jiro wax khasaare ah in tayada iyo user natiijooyinka la doonayo in line heli kartaa shuruudaha kasta oo arrinta khasaaraha iyo tayada aan.
Marka ay timaado in gurmad markaas waxaa muhiim ah in la ogaado in files mkv ka fiican on DVD ay sabab u tahay baaxadda Tifaftirayaasha iyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in aysan kaliya la wadaago waa u fududahay laakiin qaybinta sidoo kale uu noqonayaa mid fudud. Marka aan ka hadlo weelasha mkv ka dibna ay geli karaan iyaga gudaha CD oo dhan ama DVD fudayd iyo qanacsanaanta. Weelka mkv ayaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo qaab EBML iyo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la ogaado in ay tahay mid aad u dabacsan ee isticmaalka iyo sidoo kale awood u yeelan doonaan in ay la kulmaan baahida iyo dalabaadka ka mid ah dadka isticmaala ay mustaqbalka iyo sidoo kale wax ka beddelid yahay ma loo baahan yahay iyo heerka riixo sare waa inuu xaqiijiyo in meel bannaan oo weli ku jiraan. Weelka waa isha furan iyo horumarsan oo isticmaalaya furan oo af-il iyo cid kasta oo ay u soo bixi qalabka dhisi karaan weel oo aan wax arrintan iyo dhibaatada ay awoodaan. Sida CD ama DVD user a Cudarada karaa qaabab badan sida inuu doonayo inuu iyo sabab la mid ah sameeysa ayaa sidoo kale Cudarada kartaa fursadaha kala duwan ee luqadda fududaato ee user.
Sida loo dar, Edit AVI metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
WebM Encoder: Sida loo Encode WebM Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo badalo M2TS in MKV aan khasaaro